Nanao vaksiny izy ireo ary miresaka mikasika izany | UNICEF Madagasikara
Nanao vaksiny izy ireo ary miresaka mikasika izany
Tsy nisalasala ireo Malagasy monina any ivelany nandray ny fatra ho azy ireo. Nivoaka tamim-pireharehana izy ireo fa efa voaaro.
Ando Navalona Rasolomalala vita vaksiny tany Maorisy
Eleonore Rabesahala, vita vaksiny tany Etazonia
Rija Andriamihantanirina dia nahazo ny fatra roa tany New Dehli, Inde
Masera Claire Agnes dia miresaka momba ny nanaovany vaksiny tany Italia
Ando, ​​nitondra ny zanany lahy teny an-tsandriny, nampiseho tamim-pireharehana ny karatra fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19.
Ando Navalona Rasolomalala, manambady sy manan-janaka roa, dia efa vita vaksiny fanefitry ny COVID-19. Nahazo ny fatra voalohany izy ny 05 Arily tao amin'ny Hue Lien Center Ebène Maurice, nosy mpifanila vodirindrina amin’i Madagasikara. Ity mpitia fanatanjahan-tena ity sady mpanazatra miasa amin’ny federasion’ny tenisy ao Maorisy nanomboka tamin'ny taona 2020 dia tena mirehareha fa manana ilay taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny. Hahazo ny fatra faharoa izy amin'ny 30 Aprily.
Satria moa mpiasa any ivelany izy dia voatery nanao vaksiny. Any Maorisy, ampirisihina mafy ireo mpiasa mba hanao vaksiny entina mahatratra ilay fiarovana faobe aoriana ao. Na dia tsapany ho navesatra aza teo amin’ny tanany nandritra ny 2 andro dia tsy nitaraina i Ando.
Ho an'i Ando, ​​ny antony dia mihoatra lavitra ilay fiarovana faobe; nataony izany ho fiarovana ny tenany indrindra indrindra. Mifanerasera amin'ny ankizy isan'andro izy amin’ny asany ary nanao vaksiny koa izy ho fiarovany ny fianakaviany ao an-trano. « Te-hilaza fotsiny amin'ny vahoaka Malagasy aho mba hanao vaksiny tsy misy hatak'andro satria io no vahaolana farany mba hiverenan'ny fiainana amin'ny laoniny ary hahafahantsika miaina lavitry ny rarin-tsaina, » hoy i Ando teo am-pamaranana.
>>> Miverina eny ambony
Eleonore Rabesahala, vita vaksiny fanefitry ny COVID-19 tany Etazonia
Tafajanona tany Etazonia hatramin'ny volana septambra 2020 i Eleonore Rabesahala. Dokotera misotro ronono izy ary mipetraka miaraka amin'ireo zanany roa. Anisan'ireo olona nisoratra anarana voalohany izy rehefa nivoaka ny filazana fa misokatra ho an'ireo zokiolona toa azy ny fanaovam-baksiny.
Raha ny fanazavany dia ny vaksiny ihany no vahaolana afaka hiaro azy amin'ny COVID-19. Tamin'ny 25 Martsa izy no nahazo ny fatra voalohany ary ny 15 aprily ny faharoa. Tsy nahatsikaritra fiantraikany hafa izy. Mirehareha izy mitondra ny taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny satria pasipaorony ho an'izao tontolo izao iny entina manaporofo fa vita vaksiny izy. Tia manao dia lavitra i Eleonore. « Milamina kokoa aho satria fantatro fa voaaro tsara kokoa aho izao, eny fa na dia miatrika ny ‘virus mutant’ aza, ka afaka misoroka ireo forme grave, » hoy ny fanazavany. « Mamporisika ny Malagasy aho hanao vaksiny rehefa afaka atao izany. Io no fisorohana tsara indrindra manerana izao tontolo izao mba hanoherana ity zava-doza ity. »
Nahazo vaksinin'ny COVID-19 i Rija Andriamihantanirina avy ao amin’ny UNICEF any Inde
I Rija Andriamihantanirina dia mipetraka any amin'ny firenena izay ahitana trangana COVID-19 vaovao 100.000 ka hatramin'ny 200.000 ary maty mihoatra ny 1.000 isan'andro. Miaina anaty tebiteby isan'andro izy noho ny tahotra ny ho tratran'ny tsimok’aretina ary indrindra ny harary ka ho voan’ny “forme grave”. Niasa tany Inde nanomboka tamin'ny taona 2018 izy ary mitantana ny fandaharan’asa fanaovana vaksiny ao amin'ny UNICEF Inde.
« Niandry fatratra ny anjarako aho tao anatin’ireo vondrona kendrena amin’ny fanaovam-baksiny. Resaka ady aman’aina izy ity ary tsy nisalasala velively aho ny hanao vaksiny, » hoy ny fanazavan'ity manam-pahaizana momba ny vaksiny ity sady raim-pianakaviana ihany koa. Nahazo ireo fatra roa nifanesy izy tamin'ny 12 Martsa sy 15 Aprily. « Lazaiko aminareo fa nahazo toky bebe kokoa tsy mbola nisy toy izany aho. Fantatro fa na dia ho voan'ny aretina aza aho, farafaharatsiny azoko antoka fa mbola ho tranga tsotra ihany izany ary tsy mila fidirana hopitaly, » hoy ny fanazavan'i Rij. Tsaroany ilay fianakaviana iray izay lasibatr’io aretina io ka ireo nanao vaksiny tao amin'ilay fianakaviana dia tafavoaka tsy dia nisy fahasahiranana loatra, fa ireo hafa tsy nanao vaksiny kosa dia naiditra hopitaly ary nisy aza maty mihintsy.
Ny fanaovana vaksiny dia ampahany iray lehibe amin'ny ady amin'ny COVID-19. Mameno ilay ady izy io. Midika izany fa tsara kokoa raha mitohy ny fihetsika sakana izay azon'ny rehetra atao. Io no fomba tokana hahafahantsika mivoaka amin'ity valan’aretina ity rehefa vita vaksiny ny ankamaroan'ny olona eran’izao tontolo izao.
Mino i Rija fa ny ady tsara indrindra amin'ny COVID-19 dia ny fiarovana ny tenanao sy ny hafa. Mamporisika noho izany izy fa ny fanaovana vaksiny, raha vantany vao misy ilay vaksiny ka afaka manao izany ianao, dia zavatra tsy ho hanenenanao velively.
Miresaka momba ny fanaovany vaksiny tany Italia I Masera Claire Agnes
Nanao vaksinin’ny COVID-19 tany Italia i Masera Claire Agnes
I Masera Claire Agnes dia nahazo ny fatra faharoa tamin'ny vaksiny tamin'ny 22 Aprily tao Verona izay toerana nonenany nandritra ny roapolo taona. Faly izy fa nahavita izany satria, ho azy, ny fanaovana vaksiny dia andraikitra amin’ny maha-olom-pirenena azy: andraikitra ho an’ny tenany sy ho an’ny hafa izany. Toa azy, maro ireo Italiana no nandray tamim-pifaliana ny fahatongavan'ireo vaksiny ireo. Ampahan’olona vitsy dia vitsy no nandà izany. Nohamafisiny fa ny vaksiny dia fitaovam-piadiana entina miady amin'ny tsimok’aretina ary noho izany dia làlana malalaka mankany amin’ny fiainana somary ara-dalàna na fiverenana amin’ny fifandraisan'ny mpianakavy, mpinamana ary entina mamerina indray ny toekarena; fantany ihany koa anefa fa tsy hitovy toy ny taloha intsony ny ho avy. Na izany aza, « tena mamporisika ny fitandremana fatratra ireo fepetra aho: fanaovana arovava, fanasana tanana matetika, fanajana ny elanelana 1 metatra, famonoana otrik’aretina matetika amin'ireo toerana ahitana olona maro ary fihinana sakafo misy vitamina izay manampy amin’ny famokarana hery fiarovana, » hoy izy teo am-pamaranana.
Tian’i Sahondra ny mahita ankizy salama
Mpanentana ara-pahasalamana ao amin'ny fokontany Tsimialona efa ho 10 taona izao i Sahondra Rasoarimanana nohon’ny fitiavany ny ankizy ho salama
Ny fanaovam-baksiny ao an-tanàna dia tsy mandreraka ny zaza
I Volasoa dia isan'ireo reny nitondra ny zanany hatao vaksiny nandritra ny paik’ady manakaiky vahoaka notanterahina tao amin'ny tanànany ao Analabe.
Tsy marefo ny zaza vita vaksiny
I Tanteliniaina dia nampanao vaksiny an’i Najoro zanany, 2 volana sy tapany, araka ny tetiandro fanaovam-baksiny
Fanentanana momba ny COVID-19, tolona isan'andro
Ity programa fampahafantarana ny COVID-19 ity dia tohanan'ny UNICEF sy ny Governemanta Koreana